LG G6 wuxuu fadhiyaa dhinaca LG G5 si uu u muujiyo kala duwanaanshaha | Androidsis
LG ma rabto inay kaga tagto puppet aan madax lahayn tan badan y daadanaya oo soo ifbaxaya la xiriira calankeeda soo socda kaas oo lagu soo bandhigi doono Febraayo 26, si sax ah 4 maalmood, Shirka Caalamiga ah ee Wareegtada 2017.
Shaashaduhu waxay noqon doonaan halyeeyada ugu muhiimsan ee ka soo horjeedka taleefoonada ugu badan ee sanadka iyo LG G6, marka waxaa lagu dhejiyaa LG G5, waxay ku tusaysaa dhan cabirkeeda. Haddii G5 ay adeegsadeen dhaldhalaal "dhumuc leh", hadda waxay qabsadeen boqolkiiba oo keliya dhammaan boosaska shaashadu ku jirto.
Tan waxaa si buuxda loogu arki karaa shaandhaynta la bixiyay hadda taas ayaa na hor dhigaysa LG G6, calanka soo socda ee soo saaraha Kuuriya rajeynayaa inuu ku noqdo astaanta ilaa goobta uu dayactiray LG G2; Terminalkaas weyn ee helay sacabka bulshada Android.
Sawirkan waxaa lagu daabacay Weibo, wuxuuna muujinayaa waxa calanku ku xigi doono daabicadiisii ​​hore. Waxyaabaha kale ee ugu waawayn LG G6 waa saamigaaga shaashadda taas oo isu bedeshay 18: 9, mid si gaar ah loogu heellan yahay soo saarista waxyaabaha ku jira warbaahinta badan, gaar ahaan kuwa taxanaha ah ee TV-yada ka socda Netflix ee lagu duubay qaabkaas.
Xallinta shaashadda ayaa ku kordheysa a nooca hore ee Quad HD, 1.400 x 2.880. Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha gaarka loo leeyahay oo ku xiran shaashadda, waa geesaha wareegsan ee si cad loo arko iyadoo xitaa looxyadu ay xitaa qaloocsan yihiin.
Markaa waxaan sugi karnaa oo kaliya inaan aragno taleefankan gacanta ku jira LG laftiisa, taas oo hubaal ah runtii waxaad ubaahan doontaa inaad soo bandhigto qof kasta oo ka soo jeeda masraxa Shirka Caalamiga ah ee Mobile-ka 2017. Filasho weyn oo kor u qaadeysa iyadoo laga tagayo Samsung dhammaan boosaska ay tani ku dhici karto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » LG » LG G6 wuxuu ag dhigay LG G5 sawirkan cusub ee xaday
Telefishanka cusub ee Amazon Fire TV, oo hadda ku sii iibinaya UK, Jarmalka iyo Japan